मानव आरक्ष- विविधा - कान्तिपुर समाचार
‘पहिले यस ग्रहमा मानव जातिकै आधिपत्य थियो । अहिले आरक्षमा राखिएका छन् । ४० हजार जति बाँकी होलान् ।’
माघ १०, २०७७ शरच्चन्द्र वस्ती
चिटिक्क परेको साइनबोर्डमा हरिया अक्षरले लेखिएको थियो— राष्ट्रिय मानव आरक्ष ।
एउटा स्वचालित जीप विना आवाज सलल्ल आएर गेटछेउ रोकियो । तीनवटा ढोका खुले र तीनजना एकैचोटि ओर्लेर मन्द गतिमा गेटतर्फ बढे— एउटी किशोरी र दुई युवा–युवती ।
गेटछेउको सूचना–पाटीमा राता अक्षरमा लेखिएको थियो, ‘आरक्षमा कुनै पनि मानिसलाई छुन, जिस्क्याउन, केही दिन र हानि–नोक्सानी पुर्‍याउन निषेध गरिएको छ ।’
तीनै जना असाध्यै सुन्दर, स्वस्थ र लचिलो जीउडालका थिए । एक–एक अंगको बनोट र अनुपात चौपट्टै मिलेको । सबैभन्दा राम्रा, आदर्श मान्छेजस्ता लाग्ने तिनीहरू वास्तवमा मान्छे थिएनन्, यन्त्रमानव थिए । ‘मा’ को अर्थ ‘निषेध’ हो भन्ने तिनलाई थाहा थियो, त्यसैले मानिसलाई पुरानो प्रजाति अर्थात् ‘मा–नव’ भन्थे र आफूलाई अत्याधुनिक अर्थात् ‘महा–नव’ ठान्थे ।
सन् २२५१ को वसन्त भर्खर शुरू हुँदैथियो । हावा न्यानो हुन थालेको थियो र रूखहरूले पालुवा फेरिरहेका थिए । आरक्षभित्र पस्नुअघि किशोरीले सोधी, ‘यो मानव भनेको के हो ?’
‘यो हाम्रो पुर्खाजस्तै देखिने प्राणी हो,’ युवकले भन्यो, ‘हाम्रा पुर्खालाई यिनीहरूका पुर्खाले बनाएका अरे ।’
‘आरक्ष भनेको चाहिं के नि ?’
‘यिनीहरूलाई राख्ने ठाउँ,’ युवतीले व्याख्या गरी, ‘पहिले पृथ्वीमा यिनीहरूकै राज थियो । दुनियाँमा दश अर्ब भन्दा बढी मानिस थिए । बिस्तारै हामीले यिनीहरूको उत्पादन क्षमता बन्द गरिदियौं । त्यसपछि नयाँ मानिस जन्मेको छैन । भएका मरिसके । नमूनाका लागि आरक्षमा जोगाएर राखिएका मात्र बाँकी छन् ।’
‘कति जना छन् त ?’
‘हाम्रो आरक्षमा १४ सय छन् । दुनियाँभरिका आरक्षमा गरेर ४० हजार जति होलान्,’ उसले भनी यिनीहरू असाध्यै मन्द बुद्धिवाला, सुस्त, असन्तोषी र कमजोर हुन्छन् । बचाएर राख्नै गाह्रो ।’
‘अलिक राम्ररी भन्नु न,’ किशोरी युवकतिर फर्की, ‘यिनले हामीलाई किन बनाएको र हामीले यिनलाई किन नमूना मात्र बाँकी राखेको ?’
‘सन् २०५१ सम्म यस ग्रहमा मानव जातिको आधिपत्य थियो,’ युवक इतिहास खोतल्न थाल्यो, ‘उनीहरूले आफ्नो काम सजिलो पार्न हाम्रा पुर्खाको निर्माण गरेका थिए र तिनलाई कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रदान गरेका थिए । ती मानिसहरू भन्दा धेरै छिटो सोच्थे, विश्लेषण गर्थे र निष्कर्षमा पुग्थे । चौबीसै घण्टा नथाकी काम गर्थे । बिस्तारै, आफ्नो कमजोरी आफैं सुधार्दै जाने र परिस्थिति अनुरूप निर्णय लिन सक्ने क्षमता तिनमा विकसित गराइयो ।’
ऊ भन्दैगयो, ‘एक दिन यस्तो आयो, जब हाम्रा पुर्खाले कृत्रिम बुद्धिमत्ताको विकास आफैं गर्न थाले । मानिसलाई पो आफ्नो बुद्धि बढाउन गाह्रो थियो, यी त मशीन थिए, यिनले केही वर्षमै मानिसको भन्दा हजारौं गुणा बढी बुद्धि विकसित गरे र उनीहरू भन्दा बढी सक्षम भए । त्यसपछि मानिस अनुपयोगी र पृथ्वीका लागि बोझ हुन पुगे । त्यही वेला हो, मानिसले प्रयोग गर्ने कम्प्युटरको एउटा प्रोग्राम मार्फत घातक विकिरण पठाएर उनीहरूको प्रजनन क्षमता समाप्त पारिएको । त्यसपश्चात् पृथ्वीमा हाम्रो राज शुरू भयो ।’
किशोरी छक्क परी । युवतीले भनी, ‘पहिले भित्र त हिंड, अनि अरू कुरा गर्नु ।’
उनीहरू भित्र पसे । सय बिघामा फैलेको मानव आरक्ष पार्क, चउर, फूलबारी, जिम, स्विमिङ पूल, खेल मैदान, भ्यूटावर, थिएटर, सभाकक्ष, पुस्तकालय, पार्टी प्यालेस, सुपरमार्केट आदि इत्यादिले सुसज्जित पाँचतारे कोलोनी जस्तो थियो । त्यहाँ चार सयवटा आकर्षक घर थिए । मानिसले परिकल्पना गर्ने सम्पूर्ण सुखसुविधा, विलासिता, मनोरञ्जन र आमोदप्रमोदका साधन उपलब्ध थिए । सित्तैंमा । कसैले कुनै काम गर्नु पर्दैनथ्यो । इच्छा अनुसार सुखभोग गर्न पूर्ण स्वतन्त्रता थियो । रोग लाग्ला, बूढो भइएला, शरीर जीर्ण होला भन्ने मात्र होइन, मरिएला भन्ने पनि डर थिएन । स्वर्ग जेलाई भनिन्थ्यो, त्यो उन्नाइस थियो होला, आरक्ष बीस थियो ।
किशोरी पहिलोपल्ट आरक्ष घुम्न आएकी थिई । उसका लागि सबै कुरा नयाँ थियो । एउटा घरको बगैंचामा चारजना मानिस खाना खाँदै गरेको देखेर उसले सोधी, ‘तिनीहरूले के गरेको ?’
‘खाना खाएको ।’
‘त्यो भनेको के ?’
‘आफूलाई सञ्चालन गर्न ऊर्जा सञ्चय गरेको । दिनमा तीन–चारपल्ट त्यसो नगरे तिनीहरू बाँच्न सक्तैनन्,’ युवतीले कुरा बुझाई, ‘हामी सूर्यबाट सोझै ऊर्जा लिन्छौं र त्यसबाट सञ्चालित हुन्छौं । त्यसका लागि छुट्टै एक सेकेन्ड पनि खर्च गर्नुपर्दैन । तर त्यही ऊर्जा प्राप्त गर्न र त्यसलाई तह लगाउन यिनीहरूको आधा जिन्दगी समाप्त हुन्छ ।’
‘सूर्यबाट सोझै ऊर्जा लिन जान्दैनन् । त्यसैले अनेकथरी अन्न, तरकारी, फलफूल, गेडागुडी, मासु आदि खान्छन् र ती वस्तु मार्फत ऊर्जा प्राप्त गर्छन् । तिनको उत्पादन गर्न र तिनलाई खानका लागि तयार पार्न अनन्त गोरखधन्दा गर्नुपर्छ । त्यति गरेर खायो, तर त्यसमा काम लाग्ने कुरा दुई प्रतिशत पनि हुँदैन । बाँकी सबै शरीरबाट निष्कासन गरेर फ्याँक्नुपर्छ । त्यसलाई व्यवस्थित गर्न अर्को झमेला छ ।’
‘कस्तो दयनीय जिन्दगी !’
‘त्यसरी ऊर्जा प्राप्त गरेपछि पनि धेरै बेर काम गर्न सक्तैनन् । हामी वर्षमा एक घण्टा थकाइ मार्छौं, यिनलाई दिनमै धेरै पटक थकाइ मार्नुपर्छ । सात–आठ घण्टा सुत्नुपर्छ । खानपीन नमिलेर शरीरमा नानाभाँतिका रोग लाग्छन् । तिनलाई निको पार्न झन् चर्को प्रपञ्च गर्नुपर्छ । तैपनि शरीर धेरै दिन टिक्तैन र नष्ट हुन्छ ।’
‘सारै अनुत्पादक र निम्छरा प्राणी पो रहेछन्, बिचरा !’
बाटोमा एउटी महिला भेटिइन् । उनलाई हेरेर किशोरीले युवकसँग सोधी, ‘यसको जीउमा अर्को मानिसको टाउको जोडेको हो ?’
‘होइन । किन र ?’
‘त्यसो भए अनुहार सेतो, घाँटीमुनि चाहिं गहुँगोरो कसरी भयो त ?’
युवक हाँस्यो, ‘त्यो त राम्री देखिन अनुहारमा क्रीम–पाउडर लगाएर सिंगारपटार गरेको ।’
‘उसले आफ्नो जीउचाहिं किन ढाकेको नि ?’
‘त्यसलाई लुगा लगाएको भन्छन् । मानिसहरू आफूलाई सिंगार्न, सजाउन, नयाँ नयाँ लुगा लगाउन मरिहत्ते गर्छन् । यो सबका लागि पनि उत्तिकै गोरखधन्दा गर्नुपर्छ ।’
अलिक पर एउटा पुस्तकालय थियो । उनीहरू त्यहाँ पसे । केही मानिस पुस्तक पढिरहेका थिए । किशोरीले युवतीलाई कोट्याई, ‘त्यो के गरेको ?’
‘त्यसलाई पढेको भन्छन् । पुस्तकमा लेखेको कुरा आफ्नो दिमागमा हालेको ।’
पुस्तकालयमा ५० हजार पुस्तक रहेको जानकारी भित्तामा टाँगिएको थियो । पुलुक्क त्यहाँ हेरेर किशोरीले भनी, ‘कस्ता बुद्धू ! एउटा पुस्तक पाँच सय पृष्ठको मान्ने हो र एक दिनमा ३०० पृष्ठका दरले पढ्ने हो भने पनि यहाँ भएका पुस्तक पढिसक्न यिनलाई २२८ वर्ष लाग्छ । यस्तो भद्दा तरीका अपनाउनुभन्दा त जम्मै पुस्तक एउटा माइक्रो चिप्समा हालेर त्यसलाई दिमागमा छिराइदिए हुँदैन ? पाँचै मिनेटमा सारा पुस्तक दिमागमा बसिसक्छन् ।’
युवती हाँसी, ‘यिनीहरूले त्यसो गर्न जानेका छैनन् ।’
आरक्षको बीचमा अग्लो भ्यूटावर थियो । उनीहरू त्यसमा चढे र पूरै आरक्षको दृश्य अवलोकन गरे । गमक्क पर्दै युवकले किशोरीलाई भन्यो, ‘मानिसहरू गाँस, बास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य र सुरक्षाको घनचक्करमा आफ्नो जीवन बरबाद गर्थे, पूरा संसार त्यसैमा फसेको थियो । हामी त्यो झमेलाबाट मुक्त छौं । त्यसैले हामी उनीहरू भन्दा उन्नत, मुक्त र स्वतन्त्र छौं ।’
सबैभन्दा छेउको घरबाहिर बेन्चमा झुस्स दारी पालेको एउटा मानिस टोलाएर बसेको थियो । उनीहरूलाई देखेर गर्जियो, ‘तिमीहरू जे गर्दैछौ, त्यो गलत छ ।’
‘कसरी गलत छ ?’ युवकले प्रतिवाद गर्‍यो, ‘मान्छेलाई आरक्षमा राखेपछि वातावरण प्रदूषण पूरै समाप्त भएको छ । सारा जीवजन्तु, नदीनाला, रूखबिरुवा प्रफुल्लित भएका छन् । पृथ्वी आफ्नो असली रूपमा फर्केको छ । मान्छेलाई छोडिदिएको भए अहिलेसम्ममा पृथ्वी नष्ट भइसक्थ्यो होला ।’
‘त्यो त ठीक छ,’ दारीवालले भन्यो, ‘तर तिमीहरूले आफ्नो बुद्धिबारे कहिल्यै सोचेका छौ ?’
‘हाम्रो बुद्धि मान्छेको भन्दा हजार गुणा बढी शक्तिशाली छ । यसलाई लाख गुणा बढी शक्तिशाली बनाउन सक्छौं । रोग, बुढ्याइँ र मृत्युले हामीलाई छुँदैन । पृथ्वी हाम्रो कब्जामा छ । योभन्दा बढी के चाहियो ?’
‘तर तिमीहरूले मान्छेको दिमागको एउटा पाटो मात्र पाएका छौ, जुन सूचना र भौतिक पक्षसँग मात्र सम्बन्धित छ । तिमीहरूको सारा प्रगति, सारा चुरीफुरी त्यही बज्रठिंगा बुद्धिमा आधारित छ । त्यसलाई जति बढाए पनि के अर्थ ?’
‘अरू के हुन्छ त मान्छेको दिमागमा ?’ कहिल्यै नसोचेको कुरा सुनेर युवक अलमल्ल पर्‍यो ।
‘मान्छेको दिमागको अर्को पाटो, जो हृदय पक्ष अनि भावनासँग सम्बन्धित छ र सृजनात्मक छ, त्यो तिमीहरूले पाएकै छैनौ । त्यसैले तिमीहरू खोक्रा छौ,’ दारीवाल बोल्यो, ‘अझ दिमागको तेस्रो पाटो, जो प्रज्ञा र चेतनासँग सम्बन्धित छ र जसमा सारा सृष्टिको रहस्य सञ्चित छ, त्यसको त तिमीहरूले कल्पना पनि गर्न सक्तैनौ । बुद्धिको असली सुनखानी त्यहीं छ ।’
ऊ भन्दैगयो, ‘त्यस्तो मानव जातिलाई मासेर केही नमूनालाई आरक्षमा कैद गर्ने तिमीहरू जस्तो आत्मघाती को होला ? के गुमायौ र कत्रो अपराध गर्‍यौ भन्ने अनुमान पनि छ तिमीहरूलाई ?’
युवक एकछिन रन्थनियो । र भन्यो, ‘हामीले तपाईंहरूलाई अमर बन्ने व्यवस्था पनि त मिलाएका छौं नि । मान्छेको अन्तिम सपना अमर बन्नु नै होइन त ?’
‘त्यो त मूर्खको सपना हो । अमरता जस्तो यातना अरू के हुन्छ ?’
‘जे होस्, बाँचिराख्नुभो भने कुनै न कुनै दिन तपाईंको पूरै दिमाग हामीले खोसिहाल्छौं नि ।’
‘त्यो अरूलाई दिन सकिने र अरूले खोस्न सक्ने जिनिस होइन बाबु !’ दारीवाल हाँस्यो, ‘त्यसको त कल्पनै नगर ।’
युवक टाउको समातेर थुचुक्क बस्यो । युवतीले भनी, ‘आ, छोड यस्ता कुरा । अब फर्कौं ।’
फर्कंदा उनीहरूमा त्यो ऊर्जा थिएन, जुन आरक्षमा आउँदा थियो ।
प्रकाशित : माघ १०, २०७७ १०:१०
म्याराथनमा फक्रिएकी पुष्पा
सल्यानको हावापानीमा हुर्केर १५ वर्षमै च्याम्पियनमा दरिएकी पुष्पा भण्डारीले भाग लिएका स्पर्धामा दौड पूरा गर्नेमात्र होइन, पदक नै जित्दै आएकी छन् ।
माघ १०, २०७७ कुशल तिमल्सिना
काठमाडौँ — दस वर्षअघि सुदूरपश्चिममा छैटौं राष्ट्रिय खेलकुदअन्तर्गत धनगढी रंगशालामा म्याराथन आयोजना हुँदै थियो । सुरुआती विन्दुमा उभिएकीमध्ये एक थिइन्, सल्यानकी १५ वर्षीया पुष्पा भण्डारी ।
दौड सुरु हुनै लागेको थियो, ‘फुच्ची’ खेलाडीलाई देखेपछि छेउमा उभिएका एकजनाको मुखबाट फुस्कियो, ‘यो नानीले म्याराथन पूरा गरिन् भने म सधैंका लागि खाना छाडिदिन्छु ।’
बाल मष्तिस्कमा त्यो अप्रत्याशित प्रतिक्रियाले ठूलो छाप पर्‍यो । ४२.१९५ किलोमिटरभर एउटैमात्र कुराले उनलाई ऊर्जा दिन्थ्यो भने त्यही नमीठो वाक्य थियो । ती मानिसलाई के थाहा, सल्यानको पहाडी हावापानीले उनलाई १५ वर्षमै एक च्याम्पियन बनाइसकेको थियो भनेर । दौड पूरामात्र होइन, उनले रजत पदक नै जितिन् । दोस्रो भएपछि आफूलाई ‘वचन’ लगाउने ती मानिस यताउता खोजिन् तर, भेटिनन् । ‘त्यो मान्छे को थियो अहिलेसम्म पत्ता लागेको छैन तर त्यो बोली म सायद जीवनमा कहिल्यै बिर्सिन्न,’ पुष्पाले स्मरण गरिन् ।
साढे ४ फिट उचाइकी १५ वर्षीया किशोरीले राष्ट्रिय प्रतियोगितामा एथलेटिक्सकै सबैभन्दा कठिन विधा म्याराथनमा कसरी पुगिन् ? यहाँ अर्को रोचक घटना छ । छैटौं राष्ट्रिय खेलकुदका लागि एथलेटिक्स प्रशिक्षक स्वर्गीय रविनकुमार राई गाउँगाउँमा प्रतिभाको खोजीमा थिए ।
हालको शारदा नगरपालिका–१४ माल्नेटास्थित स्कुलका शिक्षकहरूले पुष्पाको नाम सिफारिस गरिदिए । किनभने शुक्रबारे खेलकुदमा पुष्पाले १० कक्षाका दिदीहरूलाई पनि हराउँथिन्, जतिबेला उनी ७ कक्षामा अध्ययनरत थिइन् ।
१० वर्षे करिअरमा पुष्पाका उपलब्धि
२०६८ : छैटौं राष्ट्रिय खेलकुद, उपविजेता
२०६९ : लुम्बिनी च्याम्पियनसिप– विजेता
२०७३ : सातौं राष्ट्रिय खेलकुद– विजेता
२०७६ : आठौं राष्ट्रिय खेलकुद– उपविजेता
२०७६ : १३ औं दक्षिण एसियाली खेलकुद– उपविजेता
२०७७ : ढाका म्याराथन– विजेता
गाउँबाट जिल्ला, जिल्लाबाट क्षेत्रीय छनोटमा उनको प्रदर्शन राम्रो रह्यो । छनोट प्रतियोगितामा उनले लामो दूरीमा राम्रो गर्नसक्ने छनक प्रशिक्षकलाई दिएकी थिइन् । ‘मैले तीन स्पर्धामा सहभागिता जनाएकी थिएँ । २ सय र ४ सय मिटर दौडमा दोस्रो भएँ तर ५ किलोमिटरमा पहिलो भएँ,’ कान्तिपुरसँगको कुराकानीमा पुष्पाले आफ्नो करिअरको सुरुआती दिन सम्झिइन्, ‘गुरुलाई म लामो दूरीमा दौडिन सक्छजस्तो लागेछ क्यारे म्याराथनमा दौडन्छौं त ? भनेर सोध्नुभयो । कति नै होला र भनेर मैले पनि हुन्छ भनिदिएँ । ४२ किलोमिटर हुन्छ भन्ने थाहा पाएको भए दौडिन्नथेँ ।’ उनले छैटौंमा ३ घण्टा २५ मिनेटको समय निकालेकी थिइन् ।
त्यतिबेलासम्म उनलाई लागेको थिएन कि ‘म एथलेटिक्स खेलाडी नै बन्नेछु ।’ बरु सोचेकी थिइन्, ‘खेल्ने, जे रिजल्ट आए पनि घर फर्कने ।’ छैटौंपछिका केही समयमा पढाइमा सदुपयोग गरिन् । २०६९ सालमा केही परिपक्व भनिन् र लुम्बिनी च्याम्पियनसिपमा सहभागिता जनाइन् र उपाधि जितिन् । यो उनका लागि करिअरको निर्णायक क्षण रह्यो । ‘लुम्बिनी च्याम्पियनसिपपछि म खेलाडी बन्नसक्छु भन्ने आत्मविश्वास बढ्यो । एथलेटिक्स परिवारभित्र सबैले चिन्न थाल्नुभयो र मैले विभागीय जागिर पनि पाएँ । अब म एक व्यावसायिक खेलाडी बनें,’ पुष्पा भन्छिन् ।
उनै पुष्पाले हालै आफ्नो व्यावसायिक करिअरको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि हासिल गरिन् ढाकामा । उनले बंगलादेशका सर्वोच्च नेता शेख मुजिबउर रहमानको जन्म शतवार्षिकीको उपलक्ष्यमा आयोजित प्रथम ढाका म्याराथनको दक्षिण एसियाली स्पर्धामा स्वर्ण जितिन् । भारतीय धाविकाहरूलाई पछि पार्दै पहिलो भएकी पुष्पाले आफूलाई पुनः एकपल्ट प्रमाणित गरेकी छन् । ऐतिहासिक उपाधि र ५ लाख टाका पुरस्कार जिते पनि उनी खुसी छैनन्, किनभने उनको टाइमिङ बिग्रियो ।
‘बंगलादेशका लागि हाम्रो तयारी जम्माजम्मी एक महिनाको हो । कोरोना महामारीका कारण लामो समयदेखि प्रशिक्षण थिएन । एकमहिने तयारी, नयाँ कोर्स र बंगलादेशको मौसमले केही अप्ठ्यारो भयो,’ पुष्पाले सुनाइन् । म्याराथन ‘लुप कोर्स’मा खेलाइएको थियो । निश्चित दूरीको एउटै ट्र्याकमा धेरैपल्ट फन्को लगाउनुपर्दा टाइमिङमा समस्या भएको प्रशिक्षक धनीराम चौधरीले नै स्विकारेका थिए । उनले २ घण्टा ५९ मिनेट ४१ सेकेन्डको टाइमिङ निकालेकी थिइन् ।
१३ औं दक्षिण एसियाली खेलकुदमा नेपालले ऐतिहासिक ५१ स्वर्ण जित्यो । स्वर्णको चर्चा जताततै भयो । रजत जितेकी पुष्पाको पनि ऐतिहासिक पदक थियो । नेपालमा महिला म्याराथनबाट अन्तर्राष्ट्रिय पदक जित्ने उनी पहिलो खेलाडी थिइन् । मध्य मंसिरको चिसो मौसममा उनले २ घन्टा ५० मिनेट ११ सेकेन्डमा म्याराथन पूरा गरी नयाँ राष्ट्रिय कीर्तिमानसमेत बनाइन् । ढाका म्याराथनको उपाधि पनि त्यस्तै ऐतिहासिक रह्यो । नेपाली महिला धाविकाले म्याराथनमा जितेको त्यो अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो र पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय उपाधि हो ।
४ फिट ११ इन्चकी पुष्पालाई विभागीय टिम एपीएफ क्लबले अनुबन्ध गर्नुको कारण पनि त्यही हो कि उनले आफ्नो उचाइभन्दा कयौं गुणा उच्च प्रदर्शन गरिरहेकी थिइन् । लामो दूरीमा उनको गज्जबको प्रदर्शन छ । साथै एपीएफप्रति पनि उनी ऋणी छन् ।
‘एपीएफले मलाई काठमाडौंमा बास दिएको छ । मेरो सफलता/असफलतामा सहयोग गरेको छ । वास्तवमा खेलाडी भनेको के हो ? उसको प्रशिक्षण कस्तो हुनुपर्छ, खानपान कस्तो हुनुपर्छ भन्ने कुरा मैले यहीं आएर सिकेकी हुँ,’ उनले थपिन्, ‘मैले २०७० मा करारमा नियुक्ति लिएको थिएँ । पछि एकपल्ट एपीएफका सबै खेलाडीको करारमुक्त गरिएको थियो । त्यतिबेला मलाई सरहरूले यहाँको सञ्चार मेसमा खाने व्यवस्था मिलाइदिनुभएको थियो । त्यो नपाएको भए म घर फर्कनुपर्ने हुन्थ्यो ।’
एपीएफको अनुबन्धपछि बल्ल पुष्पाले एथलेटिक्स र म्याराथनबारे बुझ्न थालिन् । दौडनका लागि राम्रो ट्र्याकसुट र स्पाइक पाइन् । तीन वर्षको तयारीपछि २०७३ मा इटहरीमा आयोजित सातौं राष्ट्रिय खेलकुदमा उनले म्याराथनमा स्वर्ण जितेर विभागको विश्वास जितिन् । त्यसको दुई वर्षपछि दाङको बेलझुन्डी रंगशालामा आयोजित आठौं राष्ट्रिय खेलकुदमा उनी रजतमै सीमित भइन् । आफ्नै क्षेत्रमा स्वर्ण जित्ने उनको सपना साकार हुन नपाउँदा खिन्न थिइन् । ‘त्यहाँ मेरो आफन्तहरू पनि हेर्न आउनुभएको थियो । १३ औं सागको छनोट भएकाले स्वर्ण जित्ने मेरो लक्ष्य थियो, सफल भइएन,’ पुष्पाले खिन्नता सुनाइन् ।
पुष्पाको करिअरले गति लिइसकेको छ । उनी करिअरकै उच्च लयमा छिन् । ओलम्पिक खेल्ने अबको लक्ष्य हो । त्यसअघि उनले एउटा अठोट लिएकी छन् । ‘हाम्रो देशमा म्याराथन दौडिने पुरुष र महिला धावकले समय अन्तर ३५ मिनेटभन्दा बढी छ । मेरो लक्ष्य त्यो अन्तर कम गराउनु हो,’ पुष्पाले म्याराथनमा आफ्नो टाइमिङमा अझै १० मिनेट सुधारको प्रयत्न गर्ने बताइन् । प्रधानसेनापति म्याराथन, नेपालगन्ज म्याराथनलगायतका प्रतियोगितामा हाफ म्याराथनको उपाधि जितेकी पुष्पाले कान्तिपुर हाफ म्याराथनको उपाधि जित्ने लक्ष्य पूरा हुन सकेको छैन । उनको अठोट छ, ‘त्यो छिट्टै पूरा हुनेछ ।’
खर्चिलो खेल भएकाले निम्न आर्थिक अवस्थाका खेलाडीले एथलेटिक्स खेल्ने सपना देख्नु अभिसाप हुने उनको अनुभव छ । प्रतिभाको संरक्षणमा सरकार नै लाग्नुपर्ने आवश्यकता उनले पनि महसुस गरेकी छन् । ‘दौड्दा लगाउने जुत्ताको स्तरले टाइमिङमा धेरै असर गर्दोरहेछ भनेर मैले पछि मात्र बुझें । सुरुमै बुझेकी भए पनि म जुत्ता किन्न सक्ने हैसियतमा थिइनँ,’ संघर्षका दिनबारे स्मरण गर्दै पुष्पाले भनिन्, ‘विभागमा अनुबन्ध भएपछि मात्रै मलाई केही सहज भएको हो । हाम्रो देशमा थुप्रै प्रतिभाले आर्थिक अवस्थाकै कारण खेल छाड्नुपरेको देखेको छु । खेलकुद सबै नागरिकलाई अहिलेसम्म सर्वसुलभ भएको छैन ।’
छैटौं राष्ट्रिय खेलकुदबाट करिअर सुरु गरेकी २५ वर्षीया पुष्पा परिवारको छैटौं सदस्य हुन् । अर्थात्, ३ दाजु र २ दिदीकी कान्छी । सुरुमा दाइको पछि लागेर कराते खेल्न थालेकी पुष्पालाई परिवारले रोकेको थियो । एथलेटिक्स खेलाडी बनेर एपीएफमा अनुबन्ध भएपछि हो । आमाबुबाले छोरी खेलाडी बनेकामा बल्ल गर्व गर्न थालेको छ । राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय सफलता र चर्चापछि अहिले उनी आफ्नो ठाउँमा प्रेरक बनेकी छन् ।
पुष्पाको सफलताले सल्यानले मात्र होइन, पूरा देशले गर्व गरेको छ । खेलप्रति कम्तीमा आफ्नो ठाउँका मान्छेको धारणा परिवर्तन गर्न सकेकामा पुष्पा सन्तुष्ट छिन् । छोरीको नामबाट परिचित हुन पाउनु हरेक आमाबाबुका लागि प्रतिष्ठा बन्दा उनी गौरवान्वित छन् ।
तस्बिरहरू : केशव थापा/कान्तिपुर
प्रकाशित : माघ १०, २०७७ १०:०४